लक्षण नदेखिएका ८० प्रतिशतमा पोजेटिभ आउन सक्छः डा. राजभन्डारी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार लक्षण नदेखिएका ८० प्रतिशतमा पोजेटिभ आउन सक्छः डा. राजभन्डारी
लक्षण नदेखिएका ८० प्रतिशतमा पोजेटिभ आउन सक्छः डा. राजभन्डारी
२०७७, २ बैशाख मंगलवार ०८:२२
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले कोरोनाको संक्रमणका लक्षण धेरैमा नदेखिने भएकाले परिक्षणको प्रभावकारीतामा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवस्यक भएको बताउनुभएको छ । सामान्य लक्षण नै नदेखिएका ८० प्रतिशत मानिसमा सक्रमण भेटिन सक्ने भएकाले परिक्षणलाई बढाउन आवस्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा कुरागर्दै डा.राजभण्डारीले अहिले परिक्षणका विभिन्न विधिहरु विकसित भइसकेका र यस्ता प्रविधिलाई सरकारले चाडो नभित्राए समस्या बढेर जाने बताउनुभयो । उहाँले सुरुमै विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परिक्षण गर्न नसक्दा समस्या बढेको दावी गर्नुभयो ।
सुरुमा चिकित्सकहरुको सुझावलाई सरकारले नटेरेको र लकडाउन गर्न पनि ढिला भएको भन्दै उपत्यकामा सोमबार भेटिएका व्यक्ति बेलायतबाट आएका र उनिहरुको आजको परिक्षणबाट मात्रै अपार्टमेन्टमा रहेका अरुको अवस्था थाहा हुने उहाँको भनाइ छ । राजभण्डारीले सरकारले औषधी ल्याउने काम गर्न नसक्दा अझै पनि धेरै टेष्टहरुका प्रविधिहरु आउन नसकेको र काठमाडाँैमा पनि यस्ता संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘परिक्षणको दायरा बढाउन अझै आवस्यक छ । ११ हजारमा १४ जना देखिएका छन् । सवै क्षेत्रमा पुर्याउ । हामी सवैले सर्तक हुनुपर्यो । सरकारले भनेको स्वास्थ्यकर्मीले भनेको नमान्ने काम भएकाले समस्या थपिन सक्छन् । सवैको सहयोग हुनुपर्छ । सनसिटि अपार्टमेन्टका सवैको टष्क्ष्ट हुन्छ । ८० प्रतिशतमा लक्षण विनै देखिने भएकाले समस्याको एसिकन गर्न सकिदैन । Source: radionrn.com
Previous articleकोरोनाको वहाना बनाएर ९ महिनाकी गर्भवती डेरा निकाला
Next articleडाँडाकाडामा हिउँजस्तै सेताम्मे असिना, भुईमा दुई फिटसम्मको थुप्रो